प्रसाधन सामग्रीको उत्पादनको लागि पावर अल्ट्रासाउंड - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
अल्ट्रासोनिक प्रसंस्करणमा प्रविधि र व्यक्तिगत हेरविचारको विकास र निर्माणमा धेरै आवेदन क्षेत्र छ।
कस्मेटिक उद्योगमा अल्ट्रासोनिक अनुप्रयोगहरू इम्युसनहरू, डेलिजनहरू, कण आकारको कमी, लिपोस्मम तयारी, र सक्रिय यौगिहरूको निकासी समावेश गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक उपकरण प्रयोगशालाहरुमा अनुसन्धान र ठूलो क्षमताओं को पूर्ण-व्यावसायिक उत्पादन उपलब्ध छ।
अल्ट्रासोनिक प्रसाधन प्रसाधन को प्रसंस्करण
छालाको हेरचाह र सजावटी कस्मेटिक उत्पादनहरू उच्चतम गुणस्तरको स्तर पूरा गर्नै पर्छ। यो उद्देश्य पूरा गर्न विश्वसनीय प्रोसेसिंग टेक्नोलोजी महत्वपूर्ण छ। पावर अल्ट्रासाउंड एक विश्वसनीय होमगेनलाइजेशन र निकासी प्रविधि हो, जसले अनौठो परिणाम प्राप्त गर्दछ र मूल्यवान, अभिनव उत्पादनहरू उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ। कस्मेटिक अनुसन्धान र विकासको साथ गति राख्न, शक्तिशाली र अनुकूलन होमगेनरहरू आवश्यक पर्दछ। Hielscher अल्ट्रासोनिक्स तपाईंलाई प्रशोधनको प्रत्येक चरणको लागि विश्वसनीय अल्ट्रासोनिक उपकरण प्रदान गर्दछ – बाट नयाँ ढाँचाको विकास अनुसन्धान प्रयोगशालामा अन्तिममा तपाईंको व्यवसायिक उत्पादनको निर्माण। Hielscher को अल्ट्रासोनिक्स को पूर्ण दायरा देखने को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस!
अल्ट्रासाउन्ड राम्रो आकार इमुलेशन (W / O, O / W, O / W / O, W / O / W) उत्पादन गर्न सिद्ध सिद्धान्त हो, जस्तै मिनी, नानो-वा माइक्रो-इम्युसन, डबल इमुलेन्स र चरण उल्टाउने इम्युसन। अल्ट्रासोनिक homogenization को समयमा, तीव्र cavitation सेनाहरूले दुई वा बढी अचम्मका चरणहरूलाई धेरै सानो बूंदोमा लुकाउँछ। उच्च पाईलो स्थिरता दुवै द्वारा प्राप्त हुन्छ सानो छोटो आकार र कम polydispersity बूढा आकार वितरण को। इम्युशनहरू क्रीम, लोशन, सीरम, तेल, बाल्म्स, जील्सको उत्पादनको लागि अत्यधिक सान्दर्भिक हुन्छन् & oleo gels र waxes।
विफलता / निलम्बनहरू
पाउडरहरू, चित्रहरू (जस्तै TiO2, ZnO) र खनिजहरू कस्मेटिक उत्पादनहरूमा सामान्य सामग्री हुन्, क्यान्सर, सूर्य स्क्रिन, लिपस्टिक, र नेल पलिश। उच्च गुणस्तरको समान उत्पादन प्राप्त गर्न, समेत फैलिएको छ र पाउडरको वितरण, वर्णक वा खनिज कणहरू निश्चित हुनुपर्छ। अल्ट्रासाउन्डले विश्वसनीय ठीक आकारको वितरण प्रदान गर्दछ, यो जाने को लागी होमगेनकरण प्रविधि हो।
अल्ट्रासोनिक वितरणको बारेमा थप पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
कण आकार को वितरण / मिलिंग
विशेष गरी सजावटी प्रसाधन सामाग्रीको लागि, सुँगुरहरूलाई माइक्रोन र उप-माइक्रोन साइजमा मिलाइन्छ र उत्पादनमा समान रूपमा फैलिएको हुनुपर्छ। जब तीव्र अल्ट्रासोनिक तरंगहरू तरल पदार्थ र चिपचिपा, पातलो स्लार्जहरूमा उज्यालो हुन्छन्, अल्ट्रासोनिक cavitation उच्च कतरनी बलहरूमा परिणामहरू छन् जुन कणहरू र सुँगुरहरूलाई पीडा गर्न सक्छ। उप-माइक्रोन र नानो आकार। खासकर सजावटी प्रसाधन सामाग्रीहरूको लागि (जस्तै मस्का, नेल पोलिश, लिपस्टिक, मेकअप), सुँगुरहरूको राम्रो साइज वितरण गुणस्तरको एक महत्त्वपूर्ण चिन्ह हो।
अल्ट्रासोनिक कण आकारको कमीको बारेमा थप पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासाउन्ड पौधों बाट निकाले सक्रिय घटक को उत्पादनमा सुधार गर्न धेरै तेज र कुशल प्रविधी हो। उदाहरणका लागि, एन्टिओक्सिडेंट, पोलिसेकेचाइड्स, ट्रेपेसाइड, फीनिक यौगिकहरू। गैर-थर्मल विधिको रूपमा, अल्ट्रासाउन्डले कोमल तरिकामा यौगिकहरू निकाल्छ ताकि हानिकारक र नष्ट हुनबाट जोगिन सक्छ। एक छेउमा अङ्कको उच्च उपज, अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष झूठ को लाभ हरी निष्कर्षण विलायक (जस्तै पानी) को प्रयोग मा या कम विलायक को उपयोग मा, कम निष्कर्षण तापमान, र पर्याप्त निष्कर्षण समय घटाउँदछ। अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष एक राम्रो तरिकाले अनुसन्धान गरिएको तकनीक हो र धेरै सक्रिय यौगिकहरुको लागि उत्थान गरिएको छ जस्तै ascorbic एसिड (भिटामिन सी), α-tocopherol (भिटामिन ई) र β-कोरोटिन (प्रोटाइटिन ए), सह enzyme Q10, वा फ्युलिक एसिड।
यसबाहेक, अल्ट्रासोनिक लहरहरु को आवेदन पारंपरिक निष्कर्षण तरिकाहरु लाई सुधार गर्न सक्छ जस्तै सोक्सहालेट निष्कर्षण, सुपरक्रिकिक CO2 निकासी र एंजाइमिक निकासी (उदाहरणार्थ कोलागेनका लागि)।
अल्ट्रासोनिक निष्कर्षको बारेमा थप पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
सक्रिय कम्पाउन्डहरू गहिरो छाला तहमा लगाउनको लागि इन्टरपोल्युसन हुनु पर्दछ जहाँ उनीहरूले उनीहरूको पूर्ण प्रभावहरू प्रकट गर्नुपर्दछ। लिपोजोमहरू सक्रिय यौगिकहरू र एपिआइहरूका लागि एक सामान्य क्यारियर हो। Sonication एक विश्वसनीय उपकरण हो liposomes मा पदार्थहरु लाई भंग गर्दछ र तिनीहरूलाई अन्तिम उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्न। लिपोसोमको अल्ट्रासोसो-एन्डिग्रेटेड एन्कोपलेशनको बारेमा थप पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासाउन्ड तरंगहरू घुमाउन र दुई वा बढी चरण homogenize धेरै कुशल छन् समान उत्पादन। शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक कतरनीले पाउडरहरू भंग गर्न मद्दत गर्दछ, उदाहरणका लागि एलाटिनोइन पाउडर होमगेनलाइजले स्थिर गुणहरूसँग उच्च गुणस्तर उत्पादन प्राप्त गर्न एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसैले, अल्ट्रासाउन्ड उपयुक्त तरीका हो जब यो भंग गर्न र homogenization अनुप्रयोगहरू आउँछ।
अल्ट्रासोनिक भंगको बारेमा थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
शक्तिशाली 1.5kW अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर UIP1500hd
निरन्तर प्रसोधनका लागि अल्ट्रासोनिक प्रवाह सेल रिएक्टर।
विकास & प्रयोगशालामा विश्लेषण
Hielscher अल्ट्रासोनिक प्रयोगशाला उपकरणहरू अनुसन्धान र विकास को लागि आदर्श र साथ नै नियमित प्रक्रिया को लागि आदर्श हो। ह्यान्डहेल्ड जस्ता यन्त्रहरू UP100H गुप्त अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त छन्, जस्तै मिश्रण गर्दै, विच्छेदन, पाईन्छ, Homogenizing, विघटन वा भंग गर्न। प्रयोगशाला उपकरणहरू प्रयोग गर्न सजिलो छ, र बेजोड क्षमता र लचीलापन छ। सबै यन्त्रहरू ठीकसँग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ताकि उत्पादनको स्तर सम्मको स्केलका लागि पुन: प्राप्ति योग्य हुन्छ।
अल्ट्रासोनिकेशन हुन सक्छ सजिलै उचाइयो। प्रयोगशाला परीक्षणले आवश्यक उपकरण आकार सही रूपमा चयन गर्न अनुमति दिन्छ। तल तालिका सामान्य यन्त्र सिफारिसहरू देखाउँछ जुन ब्याच भोल्युम वा प्रवाह दर प्रक्रियामा पर्दछ।
Hielscher अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरू सामान्यतया इन-लाइन प्रयोग गरिन्छ। सामाग्री रिएक्टर पोतमा पम्प गरिएको छ। त्यहाँ यो अल्ट्रासोनिक cavitation को एक नियंत्रित तीव्रता मा उजागर छ। एक्सपोजर समय रिएक्टर भोल्युम र सामग्री फीड दरको परिणाम हो। इनलाइन sonication द्वारा पारित गरेर समाप्त हुन्छ किनकी सबै कणहरु परिभाषित मार्ग पछ्याउने रिएक्टर कक्ष को पास गर्दछ। जस्तै सबै कणहरु प्रत्येक चक्रको समयमा समान समयका लागि समान sonication प्यारामिटरहरूमा उजागर गरिन्छ, अल्ट्रासोनिकेशनले सामान्यतया वितरण चौडाईलाई यसको बिरुवा बदल्दछ। साधारणतया, “दाँया पकाउने” सनटेटेड नमूनेहरूमा हेर्न सकिँदैन।
तापमान-संवेदनशील ढाँचाहरूका लागि, हेलसेस्टरले सबै प्रयोगशाला र औद्योगिक उपकरणहरूको लागि जैकेट प्रवाह सेल रिएक्टरहरू प्रदान गर्दछ। आन्तरिक रिएक्टर को पर्खालहरु को ठंडा गरेर, प्रक्रिया को गर्मी प्रभावी ढंग देखि फैल सकते हो।
अल्ट्रासोनिक रिएक्टर रिएक्टर पोत र अल्ट्रासोनिक हुन्छ सोनोट्रोड। यो एक मात्र भाग हो, यो पहनने विषय हो र यो सजिलै मिनेट भित्र प्रतिस्थापित हुन सक्छ। ओस्किलेशन-डेमोप्लिंग फ्ल्याङ्गहरू सोनोट्रोड मा कुनै पनि अभिविन्यासमा खुला वा बन्द प्रेसिजन कन्टेनर वा प्रवाह कक्षहरूमा माउन्ट गर्न अनुमति दिन्छ। कुनै बीयरिंग आवश्यक छैन। प्रवाह सेल रिएक्टरहरू सामान्यतया स्टेनलेस स्टीलको बनाइन्छ र साधारण ज्यामिति र हुन सक्छ सजिलै संग छुट्याउनुहोस् र सफा गरे। त्यहाँ कुनै सानो बाहिरी वा लुकेको कोनेहरू छैनन्। विशेष प्रवाह सेल रिएक्टरहरूले उन्नत CIP (सफ्ट-इन-भाउ) सँग भेट्न र एसआईपी (स्टेरलाइज-इन-ठाउँ) आवश्यकताहरू पनि उपलब्ध छन्।